703 online! | Sidvisningar idag: 55 918 | Igår: 185 872 |
"Raha tsy misy ny vola, dia miditra ao amin'ny fitondrana jadona nomerika"
"Raha tsy misy ny vola, dia hiditra ao amin'ny fitondrana jadona dizitaly", hoy Björn Eriksson,-pirenena teo aloha Vaomieran'ny polisy. Araka ny fandinihana vaovao, ny 24 Martsa, 2023 lasa toy ny vola ilaina any Soeda.
Aostralia manaiky an'i Jerosalema tahaka ny Israely Renivohitra
By Holger Nilsson Aostralia izao manaiky an'i Jerosalema ho renivohitry ny Isiraely.
44 maty amin'ny tifitra hatramin'izao taona ity tany Soeda
Hatreto tamin'ity taona ity dia efa nisy 44 mahafaty tifitra tany Soeda. Ny firaketana an-tsoratra avy tamin'ny herintaona amin'ny 43 maty ny ady.
Fiangonana Boky Torolalana fisakaizana manimba ara-baiboly ho pelaka fifandraisana
Ny boky torolalana fiangonana vaovao manimba tantara ara-baiboly hampiditra droa mitovy fananahana ao amin'ny tsinjara momba ny fanambadiana. Lazain'izy ireo fa ny namana Davida sy Jonatana sy Rota sy Naomy momba ny pelaka ny fifandraisana.
Afaka hahatakatra ny famantarana?
By Mikael Walfridsson Raha mianatra ny famantarana ny fotoana voatondro, dia afaka matoky ny, fa miaina amin'ny ho avy vita. Inona ary ny toetra izay zava-dehibe ho antsika ny mahafantatra sy mahatsapa ny fotoana iainantsika?
Ve ianao sahy hevitrao?
AI - fahaizana artifisialy - ny fahatanterahan'ny amin'ny Baiboly 2000 taona lasa izay
Fa efa mitranga amin'ny breakneck hafainganam-pandeha dia AI, solon-tsaina (fahaizana artifisialy), ary efa nivoatra miteny sy fisainana robot. Tsy manoratra izany mba hampitahorana, fa mba tonga saina hoe hatraiza izany 2.000 taona lasa izay nilaza mialoha ny Baiboly no fandrosoana teknolojika, ka manana ny zo maneho ny fotoana!
Firenena Mikambana mamitaka fifanarahana nekena omaly
Photo: Free fotoana.
Omaly dia nankatoavina Fifindrà-monina Dinan'i ao amin'ny Firenena Mikambana izay, amin 'ny fitsipika, hanokatra ny sisin ho maimaim-poana ny fifindra-monina. Fa ho toy ny fanasana nahery Nobel omaly nanjavona tantara mafy fifanekena Firenena Mikambana ao amin'ny haino aman-jery tabataba.
Ny fahitana ny amin'ny farany voan 'ny hazo fahalalana
Mety ho toa maloka endrika, fa izany no matanjaka indrindra Contemporary Time Ny toetra isika dia mamaky momba ny amin'ny fahitana izany, ary ao amin'ny Baiboly, ary tsy maintsy hahatonga antsika ho fandikana ny zo Time!
Homboy, homboy amin'ny hazo fijaliana Izy!
Mpamaky Mail nataon'i David B Azo antoka fa, mpihetraketraka niantsoantso hoe: Homboy amin'ny hazo fijaliana, homboy amin'ny hazo fijaliana!, Ny mpanara-dia an'i Jesosy, ary inona no Jesosy dia mijoro ho. Avy eo izy ireo dia very ny antony fa tsy mahatsapa fa ny fitifirana ao an-tongotra ny tenany.
Ny finoana silamo namelatra miaraka amin'ny fanampian'ny Fiangonana ny soedoa
Christer Åberg mandeha amin'ny alalan'ny loha sasany vaovao. Tsy misy isalasalana fa miaina amin'ny andro farany rehefa maka vaovao ny sasany amin'ireo.
People olona ny Fara Andro
Miaraka amin'ny fanehoan-kevitra etsy ambony, misy afaka hiantso ireo rehetra izay mihevitra fa efa akaiky ny fotoana ary mba haka ny vokatry ny azy.
Ny lanitra telo ao amin'ny Baiboly
Ao amin'ny andininy voalohany amin'ny Baiboly dia milaza ao amin'ny soratra tany am-boalohany fa Andriamanitra nahary ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra nahary ny lanitra bebe kokoa.
Soeda-bola maimaim-poana ao anatin'ny telo ka hatramin'ny dimy taona - Bible faminaniana tanteraka
"Soeda dia mety ho ny 'cashless' ao anatin'ny telo ka hatramin'ny dimy taona", hoy ny governora lefitry ny Skingsley Cecilia tao amin'ny banky fihaonambe tany Londres.
Tonga i Jesosy, ary ho avy indray
Miandry izahay Jesosy fanindroany, fa tsy ny voalohany. Ary tonga izany dia tsy ho ela. Fa Jesosy, raha tonga indray ny tady, dia ho amin-javatra fa tsy ny fotoana voalohany izay nihaviany. Fantatrao ve hoe inona no mety ho na inona na inona?
Raha vao voavonjy, voavonjy foana?
Kalvanistpstorn Pastor John Loopez dia nomen'ny Tompo ny mahita ny diso izany fotopampianarana izany.
Horohoron-tany any Alaska - Jesosy faminaniana ho tanteraka
Alaska dia voan'ny horohoron-tany mahery be roa. Mandeha tsara rehefa Nanambara loza vonjy taitra. Jesosy miteny ny horohoron-tany lehibe hitranga. Aoka isika hivavaka ho an'ny rehefa voa.
Faminaniana fisandratana sy ny Fahoriana Lehibe
Naminany ny Baiboly fa ny fotoana no hitranga ny fisandratana sy ny voavonjy ho any an-efi-trano any raha ny fahoriana dia ao amin'ny fandrosoana eto An-tany.
Vecka 51, måndag 17 december 2018 kl. 07:55
Izy dia mandray anjara amin'ny chandelier
Amanda Liberty dia anjara amin'ny chandelier fa "tia hanoroka sy ny hamihina miaraka."
Tsy hamela ao amin'ny maizina
Raha ny fanentanana fanompoana an'Andriamanitra àry, dia efa tokony ho lehibe kokoa na toe-javatra izay ny vatako sy ny fanahiko notandindomin-doza. Fandrahonana ho faty avy amin'ny neo-Nazia, satria nitsangana aho ka nafeniny mpitsoa-ponenana, tena akaiky ny kofehy sy sexkriminalitetens haizina amin'ny alalan'ny fanaraha-maso ny toe-javatra, besvärjd sy fanamby ara-panahy Duel ny occultists.
69-taona te-hanova ny fiainana ho 49
Ny 69 taona, Emile Ratelband any Holandy te-hahazo ny ara-dalàna ny 49 taona Mafy taona.
"Jesosy Kristy namonjy ahy tsy ho azon'ny 27 taona ny firaisan'ny samy lehilahy"
Davida fijoroana ho vavolombelona matanjaka ny fomba natao voavonjy sy namonjy Jesosy ny 27 taona ny Firaisan'ny Samy Vehivavy. Zavatra lahatsoratra.
- no anarako, David, aho 44 taona, ary izany no fijoroana ho vavolombelona momba ny fomba Jesosy namonjy ahy hatramin'ny roa-polo-fito taona ny lehilahy miray amin'ny lehilahy. Miteny ho fitiavana.
Troendedöparna nandoro, maty an-drano hanapaka ny lohan'i
Maro ireo izay efa niaritra fanenjehana, am-ponja sy namono izay mankatò ny mpino ara-Baiboly-batisa asitrika.
Batemy: Aiza, fotoana sy ny fomba
Eto no omeko anao ny sasany Soratra Masina mazava tsara momba ny batisa natao izany, raha efa natao sy ny fomba.
Dia ny Andriamanitry ny Baiboly toy ny andriamanitra ny CORAN?
"Ireo izay mihambo ho tia, voninahitra sy hanompo an'Andriamanitra, raha ny marina aza fa tsy tia, voninahitra sy ny fivavahana an'i Jesosy."
Nanambady hologram Hatsune Miku
Akihiko Kondo mihazona ny saribakoly dikan-tenin'ny hologram Hatsune Miku iza izy nanambady. Image Source: Facebook.
A 35 taona, lehilahy any Japon dia nanambady hologrom. Ny fampakaram-bady lany 160.000 satro-boninahitra. Ny saribakoly misolo tena ny vehivavy solosaina fandaharana.
An-danitra TV7 hanokanana Uppsala
TV mpamokatra Ruben Agnarsson, mpanorina sy filohan'ny Ojares Martti, fantsona mpitantana Daniela Persin sy Christer Åberg.
Dia voaasa ho any amin'ny fahitalavitra any an-danitra kristianina ny Studio TV7 fanokafana in Uppsala.
I Jesosy telo fandresena izao tontolo izao-manan-tantara
I Jesosy telo fandresena izao tontolo izao-manan-tantara, ny fanomezana ho an'ny olona rehetra eto amin'izao tontolo izao. Fa i Jesoa Kristy no alalan'ny Sorompanavotany dia mbola tsy nisy toy Triple Fandresena! Ny zava-tsarotra dia 3 faritra samihafa fa Izy eo anatrehan'Andriamanitra ilay Mpitsara Fara Tampony sy eo anatrehan'ny: Ny tontolon'ny fanahy dia tsy maintsy handresy.
Sedan 23:42 2013-08-16 har det varit 458 775 056 sidvisningar på Apg29! Apg29 har just nu 17 061 bloggartiklar, 92 365 kommentarer och 60 543 bönämnen.